16 Jir Badbaadiyey 9 Carruur ah oo ay isku Dugsi Yihiin | Maankaab.com
16 Jir Badbaadiyey 9 Carruur ah oo ay isku Dugsi Yihiin
Wiil yar oo magaciisa la yidhaa Tiskeywa Gamungu, da’diisuna tahay 16 jir, ayaa badbaadiyey sagaal arday oo isku dugsi yihiin, kadib markii doon yar oo ay saarnayeen kula gaddoontay harada Lake Victoria ee dalka Tansaaniya oo ku yaal bariga qaaradda Afrika.
Wiilkan yar oo naftiisa u huray inuu saaxiibaddii badbaadiyo, ayaa hay’adda Suleiman Koya Foundation ku abaalmariysay geesinimada uu muujiyey darteed 2 milyan oo lacagta Tansaanya ah ($894), iyadoo sidoo kale wiilkan lagu tababari doono xirfadda badbaadinta, sida lagu daabacay mareegta Citizen oo Maankaab soo xigtay.
“Da’diisa marka la eego maaha shaqo fudud in la badbaadiyo sagaal arday oo aad isku fasal tihiin oo biyaha ku qarraqmay. Waxa uu qabtay shaqo cajiib ah oo ay ahayd in qof weyn qabto. Waxa uu u qalmaa abaalmarin,” ayuu yihdi Babbie Kabae oo ah weriye telefishanka Cloud TV ka tirsan oo warkan tebinayey.
Waxa uu wiilkan badbaadiyey sagaal ka mid ah 21 arday oo doontaan la qarraqantay waqti ay waxbarasho ka baxeen, ilaa haddana waxa la la’ yahay saddex ka mid 21-kaas arday.